Iyo Maze Runner Saga, naJames Dashner | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Type, Vechidiki Mabhuku, Novela
The Maze Runner (saga Maze mumhanyi, muchiSpanish) inoteedzana yesainzi enganonyorwa yakanyorwa nemunyori weAmerica James Dashner. Mazita ayo mashanu akaburitswa pakati pa2009 na2016, pamwe nebhuku reshamwari Iyo Maze Runner mafaira (2013). Mune zvinyorwa zvinyorwa iri mukati meiyo dystopias yevechiri kuyaruka nevakuru vechidiki.
Kunge zvakateedzana The Hunger Games (Iyo Nzara Mitambo) uye Divergent (Divergent), Maze mumhanyi akagamuchira ratidziro dzesvomhu. Saizvozvo, kugamuchirwa kwayo pakati peveruzhinji kwave kunakidza. Hazvishamisi kuti matatu ekutanga mazita akateedzana akatounzwa zvinobudirira kubhaisikopo uye mamwe mafirimu maviri anotarisirwa, zvirinani.
1 Nezve munyori, James Dashner
1.1 Iwo Maze Runner saga mabhuku
2 Kufanana uye misiyano neiyo Iyo Nzara Mitambo uye Divergent
3 Zvinyorwa zveMaze Runner - Iyo Maze Runner (2009)
4 Zvinyorwa zveThe Scorch Trials - Kuedzwa neMoto (2010)
5 Zvinyorwa zveRufu Rufu - Iyo Inofa Cure (2011)
6 Zvinyorwa zveKill Order - Lethal Virus (2012)
7 Zvinyorwa zveThe Fever Code - CRUEL Code (2016)
8 Vanonyanya kutaurwa veSaga yeMaze Mhanya
Nezve munyori, James Dashner
James Smith Dashner akaberekerwa muAustell, Georgia, United States, musi waNovember 26, 1972. Akaenda kuBrigham Young University, kwaakadzidza accounting. Nekudaro, mumazuva ake ekoreji akasarudza kuve munyori, kubvira paudiki hwake aive anofarira kuverenga. Mushure mekuyedza kwakawanda, Dashner akagadzira hunhu hwaJimmy Fincher uye akawedzera zvakasikwa zvake kuti apedze bhuku rakateedzana Jimmy Fincher Saga.
Mushure mekupedza ese mana mazita aJimmy Fincher, Dashner akatendeukira kune imwe nhevedzano: The Maze Runner. Kunyangwe, zvese zviri zviviri zvirongwa zvakafanana mukuti zvinokura zvakatenderedza vechidiki vanoita zviitiko zvine njodzi. Panyaya iyi, munyori akataura kuti akakurudzirwa zvakanyanya na Ishe wenhunzi (Ishe weNhunzi) naWilliam Golding uye Ender's Game (Mutambo waEnder) naOrson Scott Kadhi.
Mabhuku esaga The Maze Runner
Muchiitiko chekutanga, trilogy inotarisa hunhu Thomas yakavhurwa: The Maze Runner (2009), Kupisa Kwekuedzwa (2010) uye Mushonga WeRufu (2011). Shure kwaizvozvo, prequel bhuku rakaonekwa Iyo Kill Order (2012), uko kutsanangurwa kwenyaya yacho yese. Muna 2016 yakaburitswa Iyo Fivha Kodhi, inowanikwa maererano nenguva yezviitiko zve Iyo Kill Order y The Maze Runner.
Kufanana uye misiyano neiyo Iyo Nzara Mitambo uye Divergent
Maererano ne The Guardian (2014), fanano pakati pebhuku rekutanga ra The Maze Runner nevaya The Hunger Games y Divergent zvinoshamisa. Kubva pakutanga, vatatu vesaga vanoisa ivo vanopokana mune yepashure-apocalyptic nyika yakadzvinyirirwa nehutongi hwehutongi. Mavari, gamba diki kana gamba rinoiswa muyedzo muzviitiko zvakasiyana zvinotyisidzira hupenyu uye vanomanikidzwa kurwira hupenyu hwavo.
Ipo bhuku ra Iyo Nzara Mitambo yakanyorwa mumunhu wekutanga, murondedzeri we Maze mumhanyi iri mumunhu wechitatu. Mumwe mutsauko ndewekuti The Maze Runner ine dhizaini padhuze nezvakavanzika zvinyorwa zvichienzaniswa ne Divergent y The Hunger Games. Asi aya ekupedzisira maviri akaonekwa zvakanyanya, vese nevateereri uye nevanoongorora.
Zvinyorwa zveMaze Runner - Iyo Maze Runner (2009)
Pakutanga kwetatu, Thomas, ane makore gumi nematanhatu protagonist, haayeuke chero chinhu kunze kwezita rake nekuti ndangariro yake yakadzimwa. Iwe warasikawo track ye Gladers. Ndokunge, vechidiki vari munzvimbo yepakati inonzi iyo Glade (kujekesa) mukati me maze (yakakura maze). Chokwadi chaThomas chete kudiwa kwekugadzirisa iyo maze (iyo mazekuponesa vagari vayo uye iye pachake.
Zuva rega rega boka diki revakomana - vamhanyi - vanobuda mu glade kutarisana nezvisingazivikanwe kuti uwane nzira yekubuda uye kuna Thomas. Pamusoro pezvo, madziro eLabyrinth anofamba husiku hwoga hwoga kuti abvise kubvisa (uye kuichengetedza kubva kuzvikara zvekunze). Nenzira iyi, kuoma kwekuigadzirisa kuri kuramba kuchiwedzera.
Zvinyorwa zveThe Scorch Trials - Kuedzwa neMoto (2010)
Mushure mekutiza maze, Thomas anonzwa akachengeteka uye akagadzirira kutanga hupenyu hutsva hunofadza neshamwari dzake. Asi kamwe kamwe anokandwa munzvimbo yemurenje umo chikafu chiri kushomeka, pamwe nekudzivirirwa kubva kune rakasviba zuva. Ipapo iyo Gladers vanomanikidzwa kuyambuka renje iri rakazadzwa nevanhu vanodzorwa nehunyengeri na The Flare (iyo flare).
Kuwedzera kutuka mukukuvara, WICKED (chinhu chinodhonza tambo mumumvuri) chinotumira mhando dzese dzezvikara uye zvinotyisa kurwisa Gladers. Zvishoma nezvishoma, pfungwa nemitumbi yavo inotanga kupa pasi pekumanikidzwa kwemiedzo yenguva inotyisa. Nekudaro, vanozvipira kusimba kuti vazviponese. Kutengesa kwaThomas kunoshumirwa pakati pekupisa kunopisa.
Zvinyorwa zveRufu Rufu - Iyo Inofa Cure (2011)
Mubhuku rekuvhara trilogy, iyo Cranks ivo vanoratidzika sekutyisidzira kukuru mumuedzo wechitatu. Izvo ndezvevanhu vanopenga - vakashandurwa kuita zombies - nekuda kwehutachiona hwehutachiona hunotsanangurwa mukati Iyo litmus bvunzo. Iri bhuku rinojekesa zvakakosha nezve kutanga kwesaga apo Thomas anoyeuka kugara kwake kupfupi ari glade.
Saizvozvowo, hunhu hwe The Flare uye Boka B (boka revanhu vane hutachiona hwakafanana neakawanda e Gladers). Gare gare, iyo Gladers uye nhengo dzeBoka B dzinokwanisa kudzoreredza ndangariro dzadzo zvizere uye kutiza kubva kunzvimbo yeWICKED. Asi Thomas anodzivisa kudzoreredzwa kuitira kununura vamwe vake vese.
Zvinyorwa zveKill Order - Lethal Virus (2012)
Makumi nematatu makore zviitiko zvisati zvafumurwa mu Maze mumhanyi, nyika yakaparadzwa nemirazvo yezuva uye kufa kwevanhu vazhinji. Ivo protagonists, Maka naTrina, vanonetsekana kuzvinunura uye vanoendeswa kunzvimbo yekugara. Gore rakatevera, iyo PFC inorwisa nyika nemiseve yakatapukirwa nehutachiona hwe zombie. Neichi chikonzero, rudzi rwevanhu rwuri padanho rekutsakatika.
Munharaunda iyi, Mark chete, Trina, naDeeDee (musikana ane makore matanhatu) ndivo vanopona. Pakupedzisira vanoumba genge padivi paAlec naLana kuti vabatsirane pavanotiza guta revane hutachiona. Hutsinye nekutyisa ndiwo marongero ezuva iri mubhuku rine mhondi yakawandisa kupfuura mamwe ese trilogy akaiswa pamwechete.
Zvinyorwa zveThe Fever Code - CRUEL Code (2016)
James Dashner akatorwa.
Bhuku rinorondedzerwa pamaonero aThomas. Inotaurira kuti akaparadzaniswa sei nevabereki vake vane hutachiona. Akabva aendeswa kuchipatara uko masayendisiti akamuudza kuti hutachiona hwake ndiyo tariro yekupona kwevanhu. Saizvozvowo, James Dashner anotsanangura mubhuku rino kuti Thomas naTeresa vakabatanidzwa sei mukugadzira labyrinth pavakaiswa mukati iyo Glade.
Pamusoro pezvo, hukama, hukama uye makwikwi pakati pevamwe vakomana ve iyo Glade. Pamwe, Iyo Fivha Kodhi ibhuku rakadzika kwazvo kubva pakuona kwemanzwiro echisiko chose Maze Runner. Ehezve, semamwe mabhuku ari musaga, hapana kushomeka kwezviitiko zvine chisimba uye akawanda zombie anouraya.
Vanonyanya kutaurwa veSaga yeMaze Mhanya
(Mabhuku 1 - 3 ne5, chimiro chipfupi mumba) Ndiye mumwe wevagadziri ve labyrinth naTeresa Agnes. Aizove mutungamiri weboka A re Gladers. Zita rake chairo raive Stefano asati abvutwa na WICKED. Ainzi Thomas achireva Thomas Edison.
(Mabhuku 1 - 5) zita rake rakafemerwa naAmai Teresa. Iye ndiye musiki we labyrinth na Thomas. Zita rake chairo ndiDeeDee (anowanikwa mubhuku 4).
(mabhuku 1 - 3 ne5) akatumidzwa zita raSir Isaac Newton. Iye ndiye mutungamiri weboka reBritain reBoka A reiyo Gladers uye wechipiri mukuraira kwechikamu chaAlby. Ndiye mukoma waSonya, mumwe wevasikana vari muGroup B, waakadaidza kuti Lizzy.
(Mabhuku 1 - 3 ne5) ndiye mutungamiri weboka reAsia reboka A reiyo Gladers uye muchengeti we Vanomhanya (vamhanyi). Aive zvakare mutungamiriri mukuru we Gladers panguva yemoto bvunzo.
(Mabhuku 1 - 3 ne5) ndiye anopikisa akateedzana. Aive mutungamiri weboka A re Gladers Thomas paakanzi muvengi panguva yebhuku rekutanga. Asara kune vakafa mumiedzo nemoto, anoonekazve mubhuku rechitatu seshamwari. Gally anotumidzwa zita raGalileo.
(Mabhuku 1 ne5) ndiye aive wekutanga mutungamiriri we Gladers. Yakatumidzwa zita raAlbert Einstein.
(Mabhuku 1 ne5, anotaurwa mumabhuku 2 ne3) Shamwari yepamwoyo yaThomas. Anodanwa zita raCharles Darwin.
WICKED chinzvimbo chepamusoro chinzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Iyo Maze Runner Saga
Isu tinoongorora muchidimbu iro basa "Romancero gitano" naFG Lorca